Archive du 20181201
Marc Ravalomanana “Tsy vahaolana ny valifaty, ndao hihavana”
Manaiky ny didim-pitsarana tsy azo hivalozana navoakan’ny HCC ny kandida Marc Ravalomanana, araka ny fanehoan-keviny. Misaotra an’Andriamanitra fa tafita soa aman-tsara ary vonona amin’ny fihodinana faharoa isika, hoy izy.
Jean Nirina HAFARI “Tsy manohana an-dRajoelina izany aho !”
Ny fanatontosana ny fifidianana ihany ho an-dRafanomezantsoa Jean Nirina, filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy no lalan-tokana hahafahana mampandroso ny firenena.
Fifidianana filoham-pirenena Mirary fifidianana milamina ny Amerikanina
Anisan`ireo nanao fanambarana ny andron`ny famoahan`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny voka-pifidianana ofisialy ny alarobia lasa teo ny firenena Amerikanina.
Rolly Mercia “Mamitaka sy mandainga Rajoelina”
Taorian’ny fanehoan-kevitra nataon’i Fidèle Razara Pierre mikasika an’i Andry Rajoelina notaterintsika teto amin’ny Tia Tanindrazana tamin’ny alakamisy 22 novambra teo dia miditra an-tsehatra ihany koa nanomboka omaly zoma 30 novambra ao amin’ilay fandaharana Vangivangy
Fifidianana fihodinana faharoa Miantso fitoniana sy fifanajana ny CENI
Teboka efatra no nivoitra nandritra ny sehatra ifampidinihana nokarakarain'ny CENI omaly niaraka tamin`ny solontena avy amin'ireo kandida roa hifaninana amin'ny fihodinana faharoan'ny Fifidianana Filoham-pirenena ny 19 desambra ho avy izao.
Pastera Mailhol “Tsy hanohana na iza na iza amin’ny fifidianana fihodinana faharoa”
Tsy hanohana na iza na iza ny kandida Mailhol Dieudonné Christian laharana faha-34 amin’ny fifidianana fihodinana faharoa hotanterahina ny 19 desambra ho avy izao.
Kandida Faniry Ernaivo Hampandresy an’i Dada izy sy ny olony
Nidera manokana ny fananan’ny vahoaka fo sy saina tony nanoloana ny fihodinana voalohany tamin’ny fifidianana filoham-pirenena teo ny kandida Faniry Ernaivo.
Firaisankinan’ireo kandida Mivory tsy miato
Taorian’ny fivoahan’ny valim-pifidianana ho filoham-pirenena, fihodinana voalohany, ny alarobia teo hatramin’ny omaly zoma aloha dia fantatra fa mbola miara-mikaon-doha amina toerana iray etsy Tsaralalana ry zareo avy eo anivon’ny firaisankinan’ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 25.
Tonga masiaka ny zanak’i Dada Hampandany azy amin’ny heriny rehetra
Mifanentana ary tonga masiaka ireo mpiara-dia amin’i Marc Ravalomanana hatramin’izay, toy ireo mpitari-tolona tetsy amin’ny Magro, ny antoko MFM rantsana Analamanga,…
Mpanao gazety sy ny fifidianana Mila mampiseho ny maha matihanina azy
Manana andraikitra amin’ny fampahafantarana ny momba ny fifidianana ny mpanao gazety, toy ny fanentanana, fanazavana ary ny fitaterana ny zava-misy mialoha sy mandritra ny fifidianana rehetra .
Ministeran`ny raharaham-bahiny Mandamina ireo mpiasany any ivelany
Efa miroso amin`ny fandaminana ny amin`ny fampodiana an`ireo mpiasa eo anivon`ny kaonsila (consulat) sy masoivoho any ivelany ny eo anivon`ny ministeran`ny rahraham-bahiny amin`izao fotoana izao.
Torolalana momba ny mariazy Raikitra ny “Mariage en fête” andiany voalohany
Nisokatra omaly ary haharitra hatramin’ny rahampitso alahady andro ny hetsika momba ny mariazy dia ny « Mariage en fête » tanterahina eny amin’ny Le Pavé Antaninarenina.
Fiantsenana amin’ny alalan’ny tranonkala Miavaka ny tolotra omen’ny www.ketrika.com
Tranonkala na site web ny www.ketrika.com, azo jerena amin’ny solosaina na finday na “tablette” misy “internet”. Sehatra 2 miavaka tsara ny “Ketrika”, dia fanaovana “défi sportif”, izay nanomboka tamin’ireny fiadiana ny tompondaka eran-tany tamin’ny baolina kitra ireny.
Tsipy kanetibe CBT Mahamasina Mitohy ny fanamarihana ny faha-63 taonany
Hand-ball CCOI 2018 Hangotraka ireo lalao famaranana anio sabotsy
Ireo lalao famaranana roa eo amin’ny sokajy lahy sy vavy no hamarana tanteraka ny fifaninanana CCOI Hand-ball 2018
Edito Lasa izao !
Tonga indray ity ny volana desambra. Efa nanommboka nikija ny orana omaly. T
Vaky fasana tany Belanitra Soavinandriana Manaitra ny fitsarana ireo lasibatra
Ny 8 oktobra teo no nisiana vaky fasana tao amin’ny tanànan’i Belanitra any Soavinandriana Itasy, ka lasa ny taolan-tsandrina zazakely iray sy ny lamban-drazana.
ZON’NY MPIASA TSY VOAHAJA
Fito volana tsy naharay karama ny mpiasan’ny orinasa afaka haba etsy Andraharo. Ankoatr’izay dia nitaky ihany koa ireo mpiasa ny amin’ny latsak’emboka eo anivon’ny CNaPS izay tsy naloan’ny orinasa hatrizay.
Tsy marina ny filazana miely amin’ny tambajotran-tserasera fa manohana ny filohan’ny IEM Andry Rajoelina ny tenako, hoy ny filohan’ny Hafari malagasy, Jean Nirina Rafanomezantsoa. Tsaho izany, hoy ity mpitarika fikambanana ity.
Totoafo ny fanalana ny fakon’Iarivo Nanampy kamiao miisa 20 indray ny CUA
Mitohy hatrany ny fanomezan-tanana ny SAMVA amin’ny fanesorana ny fako eto amin’ny tanànan’Antananarivo ataon’ny CUA, na tsy andraikiny aza izany,
Herisetra amin`ny vehivavy Nitombo ny isa ireo mila vonjy eny amin’ireo CECJ
Tsy mitsaha-miakatra ny tahan’ny herisetra mahazo ny vehivavy tao anatin`ny telo (3) taona izay tafiakatra 115% raha ny tarehimarika voaray teo anivon`ireo CECJ (Centre d’Ecoute et de Conseils Juridique) tohanan`ny Tahirin’ny Firenena Mikambana momba ny Mponina (UNFPA),
Famokarana herin’aratra amin’ny alalan’ny toha-drano Manankarena toerana i Madagasikara
Natolotra sy nampahafantarina omaly Zoma 30 Novambra tetsy amin’ny ministeran’ny angovo etsy Ampandrinomby ny fampahafantarana ny drafitra ho amin’ny fampiroboroboana ny fitaovana vaventy entina mamokatra herinaratra amin’ny alalan’ny toha-drano.
CANAL PLUS Madagascar Hanokatra ilay fahitalavitra “Père noel” ho fiatrehana ny fety
Herinandro telo eo sisa no isaina dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona isika. Ho famalifaliana ny mpanjifa rehetra dia hiverina hanokatra indray fahitalavitra “Père noel” ny Canal Plus Madagascar.
Kilalaon’ny ankizy any ivelany Efa misy tonga eto amintsika ireo karazany avo lenta
Tsy ho latsa-danja amin’ny any ivelany intsony isika eto Madagasikara raha ny resaka kilalao ho an’ny ankizy no jerena. Nanokatra toeram-pilalaovana goavana, indrindra eto Madagasikara mantsy ny Centre commercial Akoor digue eny Andohatapenaka.
Fandraisana manana fahasembanana an-tsekoly Manomboka mitombo isa
Ny alatsinainy 3 desambra ho avy izao no andro iraisampirenena ho an’ireo olona manana fahasembanana.